धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पुरुषको माथि बसेर सम्पर्क गर्दा कसलाई धेरै यौन आनन्द आउछ ? बास्तबिकता के हो त जानी राखौ onlinedarpan.com
Tuesday 19th of October 2021 / 11:40:08 PM
धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पुरुषको माथि बसेर सम्पर्क गर्दा कसलाई धेरै यौन आनन्द आउछ ? बास्तबिकता के हो त जानी राखौ
लाज नमानी हेर्नु धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पुरुषको माथि बसेर सम्पर्क गर्दा सानो लिङ्गले पनि धेरै मज्जा दिने ! महिला वा पुरुष कसलाई धेरै यौन आनन्द आउछ ? बास्तबिकता के हो त जानी राखौ
लाज नमानी हेर्नु धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पुरुषको माथि बसेर सम्पर्क गर्दा सानो लिङ्गले पनि धेरै मज्जा दिने ! महिला वा पुरुष कसलाई धेरै यौन आनन्द आउछ ? बास्तबिकता के हो त जानी राखौ ..
महिला पुरुषको माथि बसेर यौन सम्पर्क गर्दा महिला र उसको पेटमा दबाब नपर्ने मात्र होइन, महिला आफू नै सक्रिय हुने तथा यौन सम्पर्कलाई आफूले चाहेजस्तो र आफ्नो सहजता अनुकूल नियन्त्रण गर्न सक्छिन्।
त्यसबाहेक पुरुष माथि रहने अवस्थाको सट्टा छेउतिर वा पछाडिबाट गरिने आसनहरू गर्भवस्थाका महिलाका लागि सहज सावित हुनसक्छन्।
यस्ता प्रयोगपछि आफ्नो यौन साथीसँग उसको अनुभवका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुपर्छ। लिंगको प्रवेश नगराई यौन आनन्द प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन पनि आनन्ददायक सावित हुनसक्छ।
यदि यौन सम्पर्क पश्चात् योनिबाट रक्तश्राव भएमा, पेट दुखेमा वा गर्भ तुहिन थालेको अन्य कुनै लक्षण देखिए वा योनिबाट पानी बगे यौनसम्पर्क राख्न तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। दम्पतीमध्ये कसैलाई यौनरोग भएको आशंका छ भने त्यसको उपचार तथा कन्डमको नियमित प्रयोग आवश्यक हुन्छ।
लाज नमानी हेर्नु धरै साथीको प्रस्नको उत्तर हो यो ! महिला पुरुषको माथि बसेर सम्पर्क गर्दा सानो लिङ्गले पनि धेरै मज्जा दिने !महिला वा पुरुष कसलाई धेरै यौन आनन्द आउछ ?बास्तबिकता के हो त जानी राखौ
महिला पुरुषको माथि बसेर यौनसम्पर्क गर्दा महिला र उसको पेटमा दबाब नपर्ने मात्र होइन, महिला आफू नै सक्रिय हुने तथा यौनसम्पर्कलाई आफूले चाहेजस्तो र आफ्नो सहजता अनुकूल नियन्त्रण गर्न सक्छन्। त्यसबाहेक पुरुष माथि रहने अवस्थाको सट्टा छेउतिर वा पछाडिबाट गरिने आसनहरू गर्भवस्था महिलाका लागि सहज सावित हुनसक्छन्।
यस्ता प्रयोगपछि आफ्नो यौन साथीसँग उसको अनुभवका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुपर्छ। लिंगको प्रवेश नगराई यौन आनन्द प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन पनि आनन्ददायक सावित हुनसक्छ। यदि यौनसम्पर्कपश्चात् योनि रक्तश्राव, पेट दुखे वा गर्भ तुहिन थालेको अन्य कुनै लक्षण देखिए वा योनिबाट पानी बगे यौनसम्पर्क राख्न तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। दम्पतीमध्ये कसैलाई यौनरोग भएको आशंका छ भने त्यसको उपचार तथा कन्डमको नियमित प्रयोग आवश्यक हुन्छ।